महाभारतका भीम ‘ब्रम्हास्त्र’मा ! बने सबैभन्दा महँगा भिलेन – Medianp
महाभारतका भीम ‘ब्रम्हास्त्र’मा ! बने सबैभन्दा महँगा भिलेन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २७, २०७४१२:१०0
काठमाडौं, २७ माघ । २०१९ का सबैभन्दा ठूला फिल्मको सूचीमा छ, धर्मा प्रोडक्शनको ‘ब्रम्हास्त्र’ । रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्मलाई आयान मुखर्जीले निर्देशन गरिरहेका छन् । फिल्म अहिले फ्लोरमा गएको छ । फिलमको भिलेन समेत फाइनल गरिएको बताइएको छ ।
फिल्ममा टिभी एक्टर सौरभ गर्जुर भिलेनकारूपमा देखिने भएका छन् । सौरभ ‘महाभारत’ मा भीमको भूमिकामा देखिएका छन् । उनले ‘ब्रम्हास्त्र’बाट फिल्ममा डेब्यू गर्न लागेका हुन् ।
बलिउडमा पहिलो पटक यस्तो हुँदैछ, एक फिल्म तीन पार्टमा रिलिज हुनेछ । यही कारण यो फिल्म करण जौहरीको महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट हो । यो एक काल्पनिक एडभेन्चरलभ स्टोरी फिल्म हो । पिल्ममा रणबीर कपूर सुपरहिरो बनेका छन्, उनकी प्रमिकाको भूमिका आलिया भट्ट देखिनेछिन् ।
करणले २०१९ को अगस्ट १५ मा फिल्मको पहिलो पार्ट रिलिज हुने बताएका छन् । त्यसपछि दुई बर्षको फरकमा फिल्म रिलिज गरिनेछ । उनले फिल्मका लागि कडा मेहनत गरिरहेको बताएका छन् । रिपोर्ट अनुसार फिल्म ठूलो बजेटमा निर्माण हुन लागेको छ । फिल्मको एक्शन सिनका लागि निर्देशक मुर्जीले हडिउडबाट टेक्निशियन बलाउने तयारी गरेका छन् । यो फिल्म धर्मा प्रोडक्शनको सबैभन्दा ठूलो फिल्म हुन सक्ने बताइएको छ । यो फिल्म लगभग १०० करोडको बजेटमा बन्न लागेको छ ।
निर्देशक मुर्जीले फिल्ममा खतरनाक एक्शसन हुनेछन् । एक्सनका लागि जिम्नास्टिक, घोडचढी लगायतका तालिम समेत हुने बताइएको छ । फिल्ममा अमिताभ बच्चनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछन् । फिल्ममा मौनी राय समेत हुने बताइएको छ । मौनी नेगेटिभ रोलमा देखिनेछिन् । एजेन्सी
फिल्ममा दिइएन मुख्य भूमिका, र पनि सँधै यादगर छन् यी ११ पात्र
स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराए, गाउँपालिकाबाट दुई हजार भत्ता
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न चाहनु हुन्छ ? सञ्चार मन्त्रालयले माग्यो आवेदन (सूचनासहित)
महेशको अन्तिम संस्कारमा किन आएनन् उनका छोरा र श्रीमती ? कस्ले गर्यो अन्तिम संस्कार ?